Breziliana “mpifindra-monina tsy manana taratasy” lasa “solombavambahoaka ao Espaina” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jolay 2019 12:25 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, Português
Voafidy depiote any Espaina i Maria Dantas, Breziliana manao lobaka jean. Sary: Mariana Araújo, nahazoana alalana.
Navoaka eto ity lahatsoratr'i Maria Badet sy Rodrigo Borges Delfim tao amin'ny tranonkala MigraMundo ity, izay tafiditra ao anatin'ny fiarahamiasa eo amin'ny tranonkala sy ny Global Voices.
Sambany teo amin'ny tantaran'i Espaina, nahazo seza tao amin'ny Kongresin'ny solombavambahoaka ny depioté federaly iray teratany Breziliana. Voafidy ho an'ny antoko Repoblikana Ankavia ao Katalôna [fr] (ERC) tamin'ny 28 avrily  i Maria Dantas, nandritra ny fifidianana ankapobeny natao mialoha tany Espaina.
Vokatry ny fikatrohana ara-tsosialy an-taonany maro teo anivon'ny antoko sy ny asany ho fiarovana ny zon'olombelona ao Katalôna no antony nanendrena an'i Dantas teo amin'ity toerana ity. Izy no fahadimy tamin'ny lisitry ny antoko nisy azy, izay nahazo toerana 15 tao amin'ny Kongresy. Ny ERC no hery ara-politika Katalana voalohany tao amin'ny Kongresy Espaniola – 350 no fitambaran'ny seza nifaninanana tamin'ity fifidianana solombavambahoaka ity.
Teraka tamin'ny taona 1969 tany Aracaju, renivohitr'i Sergipe, any avaratra atsinanan'i Brezila i Maria Dantas. Mpisolovava sady mpikatroka ara-tsosialy izy ary nonina nandritra ny 25 taona tany Barcelona. Tonga tany Espaina izy mba hamita ny fianarany fihodinana faha-2 sy fahetelo momba ny zo ara-tontolo iainana, filozofia ara-pitsarana, moraly sy ny politika ary ny toekarena. Miasa aminà orinasa Katalana momba ny fitantanam-bola izy amin'izao fotoana izao, ary miady am-pivitrihana amin'ny fanavakavaham-bolonkoditra sy ny Fasisma ary ho fiarovana ny zon'olombelona, ​​sivily sy politikan'ny olona nandritra ny taona maro.
Ankoatra izay dia mpikambana ao amin'ny sehatry ny Sampana miady amin'ny Fasisma sy ny Fanavakavaham-bolonkoditra [UCFR (fr)] izy. Miara-miasa amin'ny hetsika Tras la Manta ( “ao anatin'ny palitao”, karazana sendikàn'ny mpivarotra an-dalambe ao Barcelona), ny Fikambanana iraisan-kolontsaina Latino ho an'i Katalônina, ary ny Sampan-draharahan'ny fifandraisana iraisan-kolontsaina (Itacat) ihany koa izy.
Roa taona lasa izay, nahazo ny zom-pirenena Espaniola izy, izay nanome fahafahana azy hanana zo politika. Tao anatin'ny valo taona, nirotsaka an-tsehatra betsaka teo amin'ny sehatra maro toy ny zom-pirenena, ny fifindra-monina sy ny hetsika ara-tsosialy tao anatin'ny Repoblikana Ankavia ao Katalonia (ERC) izy.
Maria Dantas manome voninahitra an'i Marielle Franco taorian'ny fandreseny tany Espaina. Sary: Mariana Araújo, nahazoana alalana.
Teraka avy amin'ny fianakaviana sahirana, nonina tany Espaina nandritra ny taona maro tsy manana antontan-taratasy izy ary mahafantatra tsara ny olana atrehana amin'ity zava-misy ity. Taorian'ny fifidianana, sy nandritra ny dinidinika an-telefaonina niaraka tamin'ny MigraMundo, dia nanokana ny fandreseny ho an'ny hetsika ara-tsosialy izy:
Misaotra betsaka ireo hetsika ara-sosialy aho noho ny fanohanan'izy ireo. Zava-dehibe izany hoe misy vehivavy sy vitsy an'isa ao amin'ny governemanta mba hanova ireo hevidiso.
Ho fankalazana ny fandreseny tamin'ny fifidianana, nanao t-shirt misy ny sarin'i Marielle Franco, mpanolotsainan'ny tanàna tao Rio de Janeiro izay maty nisy namono tamin'ny volana Marsa 2018 i Dantas.
Nilaza tamin'ny MigraMundo ity solombavambahoaka ity fa avy amin'i Marielle ny aingam-panahiny. Nilaza izy fa nanaiky ny fanasana hanatevin-daharana ny lisitry ny antoko atosiky ny hevitr'i Marielle [fr] – mikasika ny maha zava-dehibe ny tsy hanao zavatra eny ifotony ihany, fa eny amin'ny andrim-panjakana koa.
“Atsangana avy eny ifotony ny fanovana ara-tsosialy, saingy zava-dehibe ny miditra andrim-panjakana ary miasa avy ao anatiny.”
Fantatr'ity mpisolovava ity fa tsy nifidy ny fahamoràna izy. Fa ny milanja sora-baventy tahaka ny zo ara-politika ho an'ny mpifindramonina sy mitady fomba hanampiana azy ireo hiditra ao amin'ny firenena, dia misetra ny herin'ireo antoko farany havanana ao amin'ny Antenimieram-pirenena tokoa. Izany toe-javatra feno fankahalana izany no nahatonga azy hanapa-kevitra hanaiky ny fanasan'ny antoko.
Nanontanian'ny MigraMundo momba ny fisandratan'ny farany havanana any Espaina – soloin'ny antoko Vox [fr] tena, izay nahazo toerana 24 – nanararaotra izany i Dantas mba hampita hafatra ho an'ny solombavambahoaka Santiago Abrascal, mpitarika ny antoko. Sambany tokoa hatramin'ny nirodanan'ny didy jadon'i Francisco Franco (tamin'ny taona 1975) no nisy antoko avy amin'i Franco hitoetra ao amin'ny Kongresy Nasionaly
“Tsy maintsy hiatrika mpifindra monina iray avy any Nordeste (avaratratsinanana), “cabra da peste” izy (lazaina hoe olona be herim-po, mahery sy tsy manan-tahotra izay mety hiafara amin'ny fandikana fa makorelina maloto kely izany any Brezila), izay niady nandritra ny taona maro mba hanohitra ny fankahalana pelaka, hanohitra ny Fasista sy ny fankahalana silamo” izy.
Vantany vao vita ny fifidianana izay voamariky ny fandresen'ny Antoko Sosialistan'ny Praiminisitra ankehitriny, Pedro Sánchez manana seza 123, dia ny fananganana governemanta–fananganana firaisambe mba hahazoana ny maro an'isa ao amin'ny parlemanta no fanamby manaraka.
Efa nampahafantatra ny ERC an'i Dantas fa tsy hanao fampiharaharahana velively amin'ireo antoko ankavanana sy farany havanana.